IITimoty 1: 1-18
IITimoty 1 IITimoty 2
Paoly, Apostolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izao ao amin'i Kristy Jesosy,
mamangy an'i Timoty, zanako malala: ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika.
Misaotra an'Andriamanitra aho, Izay tompoiko araka ny ataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman-alina;
ary maniry hahita anao aho [fa nandro aman-alina dia mahiry hahita anao aho] (satria tsaroako ny ranomasonao), mba ho feno fifaliana aho;
fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'i Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany.
Ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomazam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tànako.
Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika, na ahy mpifatony hianao; fa aoka hianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra,
fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy, Mpamonjy antsika, Izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsi-fahalovana mandrakizay;
ny amin'io filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitory sy Apostoly ary mpampianatra [mpampianatra ny jentilisa].
Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako, ary matoky aho fa Izy dia matahiry ilay zavatra natolotro [ilay zavatra natolony ahy]Azy mandra-piavin'izay andro izay.
Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema [salama], izay efa renao tamiko.
Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny Fanahy Masina, Izay mitoetra ao anatintsika.
Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Asia; isan'ireny Fygelo sy Hermogena.
Homen'ny Tompo famindrampo anie ny ankohonan'i Onesiforosy; satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako;
fa raha tany Roma izy, dia nitady ahy fatratra ka nahita
(ny Tompo anie hampahita azy famindrampo amin'ny Tompo amin'izay andro izay); ary ny hafatratry ny nanompoany ahy tany Efesosy dia fantatro tsara.